अब एपबाटै लोकसेवा तयारी | NepalDut
अब एपबाटै लोकसेवा तयारी
एप्स इन्फो–लोकसेवा : सरकारी जागिर भन्ने बित्तिकै धेरै नेपाली आकर्षित हुन्छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मुख्य ढोका लोकसेवामा जाँच दिनेको संख्या बर्से्नि लाखौँमा हुन्छ । अहिले पनि लोकसेवाले हजारौँ संंख्यामा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गर्ने समाचार आइरहेका छन् ।
सरकारी नोकरीमा अवसर पाउनु सजिलो पक्कै पनि छैन । तोकिएको अध्ययनपछि सान्दर्भिक विषयमा गहन अध्ययन गरेपछि मात्र लोकसेवामा नाम निकाल्न सकिन्छ भनेर विभिन्न तयारी कक्षा धाउनेको संख्या पनि कम छैन । यसैलाई ध्यान दिएर मन्त्र आइडियाज कम्पनीले लोकसेवा एप बनाएको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै अब आफ्नो मोबाइलमै लोकसेवा तयारीका लागि अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
लोकसेवा एप निःशुल्क डाउनलोड गरी मोबाइलमार्फत लोकसेवाको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुका साथै प्रश्न पढ्न पनि सक्नेछन् । लोकसेवाको तयारीमा लागेका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई लक्षित गरी निकालिएको यस एपमा हाल प्रशासनको खरिदार, नासु, शाखा अधिकृतको तयारी गर्न सकिने छ ।
प्राविधिकमा कम्प्युटर अपरेटर, अनमी, स्टाफ नर्स, कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर अधिकृत, सिभिल इन्जिनियरको पुरानो प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नहरू, लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचनाहरू पढ्न र विभिन्न मोडल सेटहरू खेल्दै सिक्न सकिने छ । कम्पनीले लोकसेवा तयारीमा बसेका व्यक्तिलाई मात्र नभएर सरकारी नोकरीमा भए पनि यसबाट नयाँ सूचनाहरू मोबाइलमै प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले यसको प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगले देशको विभिन्न भागबाट लोकसेवाकै तयारीका लागि भनेर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक इ. अशोक बस्नेतको दाबी छ ।
एप कसरी चलाउने ?
गुगलको प्ले स्टोर वा एप्पलको एप स्टोरमा गएर लोकसेवा नेपाल टाइप गरी एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ । डाउन लोड गरेर लोकसेवासम्बन्धी विभिन्न सेक्सन नेभिगेट गरेसँगै होममा आउने फिडमा विभिन्न लोकसेवा उपयोगी सामग्री पनि आउँछ । यसमा दैनिक प्रश्नोत्तर, समसामयिक विषयवस्तु, मोडल सेटहरू, समाचार, सूचनाहरू, सामान्यज्ञानलगायतको जानकारी आउँछ ।
यसमा रहेको मोडल सेट बटन थिचेपछि मोडल सेट एकैठाउँमा पाउन सकिन्छ । एपमा भएको प्रयोगकर्तासँग छलफल गर्नका लागि डिस्कसन बटन क्लिक गर्न सकिन्छ । मोडल सेटमा अभ्यास गर्नका लागि एपमा रजिस्ट्रर गर्नुपर्छ । लोकसेवा प्लस सब्सक्राइब गर्नका लागि एपको होमबाट ‘जोइन लोकसेवा प्लस’ बटन क्लिक गरेर कति समयका लागि सब्सक्राइब गर्ने हो, त्यसैअनुसार गर्न सकिन्छ ।
लोकसेवा प्लसमा उपलब्ध सुविधा
साप्ताहिक रूपमा आउने समसामयिक ज्ञान क्विज
साप्ताहिक र मासिक आउने समसामयिक ज्ञान
नयाँ मोडल सेटमा निःशुल्क अभ्यास
आफूले अभ्यास गरेको सेटको पूर्ण एनालाइटिक्स र पर्फरमेन्स रिपोर्ट
लोकसेवा प्लस प्याकेजको मूल्य र भुक्तानी
१ हप्ताको २५ रुपैयाँ, १ महिनाको ८० रुपैयाँ र १ वर्षको ३ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसमा एनसेल, इसेवा, खल्ती र इ–बैंकिङको प्रयोगमार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
लोकसेवाका सूचना हेर्न मिल्ने
विभिन्न विषयमा अभ्यास गर्न सकिने
पुराना प्रश्नपत्र हेर्न सकिने
महत्वपूर्ण ऐन तथा नियमावली समावेश गरिएको
समसामयिक र राजनीतिशास्त्र समावेश गरिएको
लोकसेवाको निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम
आवश्यक दरखास्त फारम
सामान्य ज्ञानको छुट्टै व्यवस्था
आफूले दिन चाहेको पदको मात्र अभ्यास गर्न सकिने
नयाँ पत्रिकामा हरेक आइतबार छापिएको लोकसेवासम्बन्धी सामग्री राखिएको
अशोक बस्नेत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मन्त्र आइडियाज
लोकसेवा नेपाल एपमा निःशुल्क उपलब्ध तयारी सामग्री प्रयोगकर्ताले एकदमै रुचाएका छन् । हामीले विभिन्न लेखक तथा लोकसेवा तयारी गराउने संस्थासँग समन्वय गरेका छौँ, जसमार्फत प्रयोगकर्तालाई गुणस्तरीय मोडल सेट नियमित रूपमा प्रदान गर्दै छौँ ।
एपको छलफल सेक्सनमा प्रयोगकर्ताले आफूलाई गाह्रो परेको प्रश्न तथा जानकारी सबैसामु बाँड्न सक्नेछन् । एप चलाउन सुरुमा इन्टरनेटको अवाश्यक परे पनि पछि इन्टरनेटविना नै चलाउन सकिन्छ । यसले लोकसेवा तयारी गरिरहेकालाई थप सघाउ पुग्ने कम्पनीको विश्वास रहेको छ ।
५ वर्षअघि मन्त्र आइडियाज कम्पनीले लोकसेवा नेपाल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो एप अहिलेसम्म ४ लाख ५० हजार डाउनलोड भएको छ । १ लाख ५० हजार नियमित प्रयोगकर्ता रहेका छन् । ५ सय लोकसेवा प्लस सब्सक्राइबर रहेका छन् । यो एपमा २५ हजार प्रश्न राखिएको छ । यसमा २ सयवटा मोडेल सेट रहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट